Miezaka miady amin’ny fanohintohinana ny mpiseran’ny media sosialy ao Pakistan — fa hanao ny anjarany ve ny andrim-panjakana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Septambra 2018 6:03 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Español, Swahili, Italiano, English
“Tsy hangina intsony.” Fihetsiketseham-panoherana nataon'i Eunice McFarling avy ao amin'i US Air Force, ho ao anatin'ny volana fanairana sy fisorohana ny fanafihana ara-nofo tamin'ny Aprily 2016. Saripikan'i Denise M. Nevins, navoaka ho azon'ny rehetra ampiasaina.
Any amin'ny ankamaroan'ny firenena manerana izao tontolo izao, olana taloha ny fanorisorenana mifototra amin'ny mahalahy na vavy. Saingy amin'ny vanim-potoana nomerika, amin'ny hetsika ara-tenirohy toy ny #MeToo, sy ny sehatra media sosialy izay afa-miofo ho vaovao malaza ao anatin'ny fotoana fohy ny porofon'ny fanorisorenana, dia toa miova ny fifandanjan-kery eo amin'ny mpanorisory sy ny lasibatra.
Avy any Pakistana ny ohatra iray vao haingana izay ahitana lahatsary iray mampiseho lehilahy iray manorisory vondrom-behivavy iray lasa nalaza haingana tao amin'ny Facebook sy Twitter, nitarika fanamelohana ampahibemaso ary farany tamin'ny fisamborana azy.
Tamin'ny taona 2016 tany amin'ny Lemak'i Kalash, any amin'ny faritr'i Chitral ao avaratr'i Pakistana, nanomboka nanjohy vondrom-behivavy iray i Aimal Khan ary naka lahatsary azy ireo tamin'ny findainy. Nanao fanehoan-kevitra manivatsivaka amin'izy ireo izy ary tsy mitsahatra ny nangataka azy ireo hiara-maka sary aminy, na dia eo aza ny fandàvana sy ny fandrahonana amin'ny filazana azy any amin'ny polisy. Nanambara i Khan fa polisy izy tenany.
Na dia tsy mazava aza ny fotoana nanaovana ilay horonantsary, nandefa azy tao amin'ny YouTube i Khan tamin'ny 19 Jolay 2016. Roa taona taty aoriana, pejy Facebook iray antsoina hoe ‘ Islamabadians ‘ no namoaka ilay lahatsary tao amin'ny vohikalan'ny tambajotra sosialy ary lasa nalaza. Nanomboka nanapaingotra ny polisy ny olona, ​​ary nandrisika azy ireo hisambotra ilay lehilahy. Namaly ny polisy Chitral tamin'ny 19 Jona 2018 fa te hahita ny toerana misy azy.
Mandritra izany fotoana izany, nisy lahatsary hafa nipoitra nahitana an'i Aimal Khan niala tsiny noho ilay raharaha. Ny 22 Jona, nosamborin'ny polisin'i Chitral izy, izay nandefa polisy vehivavy hanatanteraka ny fisamborana. Nanazava ihany koa ny polisy fa tsy polisy araka ny efa nambarany taloha i Khan.
Tamin'ny aterineto, naneho fanohanana ny fisamborana ireo olona.
Manana hambom-po mahita vehivavy ao anatin'ny fitafiana nentin-drazana mametaka rojovy ilay zatovolahy voarohirohy tamin'ny raharaham-panohintohinana vehivavy tao Chitral Pakistan
Aimal Khan, ilay olona nanohintohina vehivavy tao amin'ny Lemak'i Kalash, Chitral nosamborin'ny polisin'i Chitral. Ankasitrahana ireo rehetra niara-nijoro tamin'ireo vehivavin'ny Lemak'i Kalash voatosika anjorom-bala
Saingy mbola maro ny fanontaniana, indrindra moa fa ny hoe lalàna inona moa izany no nampiasaina nahafahana nitazona an'i Khan an-tranomaizina.
Atoa @ChitralPolice, afa-manontany zavatra am-pinamanana ve aho?
Ahoana no nisamborana an'i Aimal Khan raha tsy misy ny fitoriana (Tati-pampahafantarana voalohany) avy amin'ny lasibatra?
Tamin'ny lalàna manao ahoana? (tohiny)
Ankona ny maro rehefa navoaka taorian'ny fanoavana onitra i Aimal Khan. Miandry fitsaràna izy.
Niteny tamin'ny mpiandraikitra ny polisy ao amin'ny Distrikan'i Chitral Atoa Furqan Bilal ny Global Voices, ka nandrenesana hoe:
Navotsotra tamin'onitra i Aimal Khan fotoana fohy taorian ‘ny naha-voampanga azy tamin'ny ampahan-dalàna azo andoavan'onitra ahafahana. Tao amin'ny Tati-pampahafantarana voalohany i Aimal Khan voampanga tamin'ny fizarana faha-354 (fanohintohinana vehivavy), , 419 (famitahana olona), 294 (manao fihetsika vetaveta am-pahibemaso) ary 341 (fikirizana hanery) amin'ny Lalàna adiheloka bevava fa tsy amin'ny lalànan-tsibera elektronikan'i Pakistan. Hotontosaina tsy ho ela ny fitsarana azy.
Miahiahy amin'ireo lalàna ampiasaina amin'ny tatitra fampahafantarana voalohany ireo mpikatroka. Na dia misy aza ny lalàna fisorohana ny heloka bevava an-tserasera ananan'i Pakistana mahasahana ny fanohintohinana tahaka izao, ary mety azo nentina hiatrehana ny raharaha Khan, tsy nolaniana ny lalàna mandra-pahatonga ny volana aogositra 2016, ary efa nitranga izay nitranga tany Chitral talohan'izany.
Nighat Dad, manam-pahaizana momba ny lalàna sy ny teknolojia, mitantana ny Orina Mpanasoa Digital Rights tsy mitady tombony ary mandray anjara amin'ny Global Voices, nanazava tamin'ny Global Voices fa tsy manana lalàna voapetraka mialoha amin'ny lahatsary mifandraika amin'ny fanorisorenana ny fehezan-dalàna heloka bevava ao Pakistan.
Nolazain'i Dad ihany koa ny fandraisana anjaran'ny media sosialy tamin'ny fisamborana an'i Aimal Khan, manondro ny fiantraikan'ny fitarainam-bahoaka amin'ny raharaha sy ny mety ho fiantraikany amin'ny valintenin'ny polisy. Nanamarika izy fa “hafatra tsara ho an'ny vahoaka” ny fisamborana tsy misy hatak'andro, fa tokony ho any amin'ireo sampan-draharahan'ny fampiharan-dalàna sy ny rafitra ara-pitsarana no mitondra ny raharaha ary miantoka ny hanatanterahana ny rariny.
Tsy zava-baovao ny tranga toy izany. Tamin'ny volana Jolay 2017, nandeha tany amin'ny lemak'i Hunza tao amin'ny faritr'i Gilgit-Baltistan ao Pakistan mba hizaha tany i Meenah Tariq avy any Lahore. Notohintohinin'ny tovolahy sasantsasany izy teny an-dalana. Satria tsy fantany ny fomba handaminana fitarainana itoriana azy ireo, dia nalainy ny sarin-dry zareo ary nandefa fanentanana tao amin'ny media sosialy izay tsy ela dia niparitaka haingana izy.
Ao amin'ny raharaha Tariq, toa hita fa namaly tamin'ny fomba mafonja ny andrim-panjakana. Rehefa nahare ny zava-niainany ny mpanampy ny komiseran'i Hunza, Anas Goraya, dia nametraka laharana fanampiana tao Hunza hiatrehana ny raharaha toy izany.
Nizara ny valin'ny tantara tao amin'ny Facebook i Tariq , izay nilazalazany ny fahasarotan'ny mizara ny tantarany ety anaty aterineto — sy miaritra ny onjam-panorisorenana taorian'izany — sy ny fahatsapana valifaty niainany taorian'ny nahafantarany ny fisian'ny laharana fanampiana:
Impiry ianao no nilazana fa tsy ilaina ny mitaraina? Tsy ilaina ny miteniteny, tsy hisy na inona na na inona hiova? Ity no porofo fa tsy izany hatrany no mitranga. Ity ny porofo ilaintsika mba hitanenana hatrany amin'ny olana atrehintsika, hanaovana ireny resaka ireny, manao izay isian'ny fifanakalozan-kevitra na dia sarotra aza izany.